Goormee ayay Dowladda la wareegaysaa maamulka Hawada Soomaaliya? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Goormee ayay Dowladda la wareegaysaa maamulka Hawada Soomaaliya?
Goormee ayay Dowladda la wareegaysaa maamulka Hawada Soomaaliya?
Maxamed Cabdullahi Salaad Wasiirka Gaadiidka Cirka & Dhulka oo wareysi gaar ah siiyay mid ka mid ah warbaahinta dalka ee ka howlgala magaalada Muqdisho (Goobjoog News) ayaa waxaa uu uga hadlay waxyaabaha u qabsoomay wasaaraddiisa .
Wasiirka oo ka waramay wax-qabadka wasaaraddiisa tan iyo inta uu xilka wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegay in waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
“Wasaaradda markii aan imid illaa iyo hadda waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, inkasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo aan jeclaan laheyn inaan qabano iyagana waa inuu suuro gali-waayeen,– marka laakiin Alxamdulilaah, waxaan u maleynayaa waxaa aan qabanay ayaa ka badan inta noo qabsami waayey” ayuu sheegay wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya
“Waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah in aan ku guuleysannay garoonka shaqadiisa in la dardar-galiyo sida in waqtigiisa la kor-dhiyo oo uu shaqeyn lahaa, shaqaalaha in loo sameeyo waqtiyo/ (Shifts) arrintaasi oo caqabad wayn ay naga heysatay, diyaaradaha subixii yimaado iyo maalintii ayaa aad u tiro badnaa hadda Isbeys badan ayaan helnay iyo fursado” ayuu sidoo kale sheegay wasiirka.
Maxamed Cabdullahi Salaad Wasiirka Gaadiidka Cirka & Dhulka oo ayaa sheegay in maamulka hawada Soomaaliya la soo wareejin-doono 30-ka bishan aynu ku guda jirno ee November.
Waxaa uu tilmaamay in Hawada Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano laga xukumayey waddanka bannaankiisa in aan dib ugu soo celinay in waddanka gudihiisa laga maamulo ay tahay guul wayn.
Wasiir Maxamed Cabdullahi ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in wax allaale wixii ku saabsan heshiisyo iyo qalab la soo iibsanayo ay soo dhamaadeen, islamarkaana mar dambe aan jiri doono qof intuu meel aado heshiis soo sixiixi doono si loo soo guuro.
Markuu ka hadlayay xilliga Hawada Soomaaliya ay la wareegayso iyo Arrimaha shaqaalaha waxaa uu sheegay in 30 bishan dowladda ay la wareegi doonto maalmulka Hawada islamarkaana Shaqalihii ajaaniibta ahaa ay saxiixeen inay ka howl-galaan magaalada Muqdisho sidoo kalena shaqaalaha Soomaalida ah ay saxiixi doonaan maalmaha soo aadan.
“Taas micnaheedu waxaa uu yahay in hawada Soomaaliya waqti yar waa laga yaabaa in isbuucyo iyo wixii lamida iyo qalab yar oo daaha inay dib uga dhacaan laakiin in laga maamulo hawada Soomaaliya waddanka gudahiisa anagga iyo OCAO waan kala saxiixanay wax dambe oo heshiis iyo saxiix ah oo noo haray majiro”. ayuu yiri wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya.
Wasiirka ayaa ugu dambayn waxaa uu sheegay in wax iska caadi ah ay tahay in garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho uu la mid ahaado garoomada Caalamiga ah ee adduunka ka jira.
Waxaa uu tilmaamay in garoonka diyaaradaha Adan cade ee magaalada Muqdisho gudihiisa laga dhisi doono Hoteel haddana la wado qorshihiisa iyo halka looga dhisayo.
XIGASHO: Goobjoog iyo Ummaddamedia
Previous articleSiyaasiyiin ka dibad baxay Muslimiin ku tukanayay goob fagaar ah
Next articleGolaha Wasiirada Jubbaland oo Kismaayo ku yeeshay shir deg deg ah (Sawiro)